Archive du 20180918
Arlette Ramaroson Hitory orinasa fanaovan-gazety
« Tsy marina ny lahatsoratra navokan’ny "Lettre de l’Ocean Indien" izay milaza fa ny Rosiana no manome ny vola rehetra hampiasainay mandritra ny Fifidianana», hoy i Arlette Ramaroson izay kandidà ho filoham-pirenena.
Ambatondrazaka Toerana telo no azo ampiasaina amin'ny propagandy
Mba tsy hisian'ny fifandirana sy ny hanajana lalàna, nametraka lamina ny kaominina ambonivohitra Ambatondrazaka amin'izao ankatoky ny fifidianana izao.
Hiatrika fotoana goavana hanova ny tantaram-pirenena ny Malagasy ato ho ato.
Bakalorea 2018 any Antsirabe Misedra olana ireo mpianatra jamba
Misedra olana ankehitriny ireo mpianatra jamba 9 mianadahy ao Vakinankaratra anio,
Miala any indray ny pesta Olona 2 no maty tany Ambalavao
Miverina indray ny pesta amin’izao fotoana. Oona roa no efa matiny tany Anjoma, distrikan'Ambalavao, raha ny vaovao vonjimaika azo.
Mpitandro ny filaminana Misy romoromo ny polisy sy miaramila..
Miha mangatsiaka ny fifandraisana eo amin’ny miaramila sy ny polisy taorian’ny nahafaty ny olon’ny Capsat tetsy Anosibe.
Tsipy kanetibe eran-tany Nanao Pao-droa i Frantsa
Nanao pao-droa i Frantsa nahitana an’i Dylan Rocher, Henri Lacroix, Philippe Quintais ary Philippe Suchaud teo amin’ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany andiany faha-48 taranja tsipy kanetibe notontosaina tany Desbiens Canada ny ny 13 - 16 septambra 2018 lasa teo.
Fofona maimbo niparitaka tao Toamasina Efa fantatra ilay orinasa nivoahany
anisan’ny vaovao iray nalaza be tao Toamasina, herinandro maromaro lasa izay ny fisian’ilay fofona maimbo nanempotra sy nankarary tratra olona maro.
Handray vadintany sy mpanao lavanty matihanina miisa 150 ny Ministeran’ny Fitsarana amin’ity taona ity.
Nangalarina tao amin’ny hopitaly Nisy nametraka teo an-dalana ilay zaza
Vao teraka telo andro monja no nisy nangalatra tao amin’ny CHU Androva Mahajanga ny 12 septambra teo ny zazakely antsoina hoe i Maminirina.